တစ်ဦးတိတ်ဆိတ်စွာဝယ်ယူပါကထိုက်သည်, ပန်ကာမပါကို PC? - သတင်း Rule
တစ်ဦးတိတ်ဆိတ်စွာဝယ်ယူပါကထိုက်သည်, ပန်ကာမပါကို PC?
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “တစ်ဦးတိတ်ဆိတ်စွာဝယ်ယူပါကထိုက်သည်, ပန်ကာမပါကို PC?” ဂျက် Schofield ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 19 နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 09.12 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ပန်ကာမပါပီစီယခုတစ်ပညာရှိဝယ်ယူ Are? ငါအသံဖမ်းအများကြီးပြုကြနှင့်တစ်ဦးအမှန်တကယ်တိတ်ဆိတ်စွာ PC ကွန်ပျူတာများ၏စိတ်ကူးကအရမ်းဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. ပေတရုက,
ကွန်ပျူတာဈေးကွက်မှာမကြာမီကတီထွင်မှုစျေးနှုန်းချိုသာပန်ကာမပါကွန်ပျူတာများကိုထုတ်လုပ်မှမြှုပ်နှံခဲ့ကြ, ကအမှန်တကယ်ရည်မှန်းချက်မဟုတ်ခဲ့သော်လည်း. အဆိုပါအာရုံပိုမိုပါးလွှာ Laptop များနှင့် Tablet ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့, ဒါပေမဲ့အဲဒီအပူပျောက်ကွယ်သွားကြီးမားသောပြဿနာများရှိသည်. Intel ကတဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့ချစ်ပ်လောင်အာဏာပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်း. အခုသူတို့အဖြစ်ပူပြင်းမရကြဘူး, သူတို့ပရိတ်သတ်တွေများအတွက်လျော့နည်းလိုအပ်ချက်များ.
ဥပမာအားဖြင့်, ထိုသို့သော Intel Core i7-4960X အဖြစ်ဟာအလွန်အစာရှောင် desktop processor ကိုတစ်ဦးရှိပါတယ် TDP (အပူဒီဇိုင်းအာဏာကို) 130W ၏, ပူပြင်းသော. 45W သို့မဟုတ် 35W ပရိုဆက်ဆာရှိသည်ဖို့အသုံးပြု laptops, ပါးလွှာစက်များအတွက် 17W မှ 15W မှကျဆင်းသော. Intel ရဲ့ Core M ကအကွာအဝေး 4.5W ကိုနှိမ့်ချ. ယနေ့တွင်, ပင်စျေးပေါ Intel ရဲ့ Atom-based ချစ်ပ် (မကြာခဏ Pentium သို့မဟုတ် Celeron BRAND) 6-10W မှာ run.
အားနည်းချက်များရှိပါတယ်. ဤသူချစ်ပ်ပူရလာတဲ့အခါ, သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရပ်စဲခံနေရသည်ခံရဖို့ရှိပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့လုံးဝမပိတ်ပစ်နေကြတယ်. ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောစကားလုံးအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဝက်ဘ်ရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်. သို့သော်, ဤသူချစ်ပ်ထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုတည်းဖြတ်တာနဲ့ဂိမ်းအဖြစ်စဉ်ဆက်မပြတ်အပြောင်းအလဲနဲ့အလုပ်အကိုင်အဘို့အသင့်လျော်မဟုတ်, သူတို့ကအသံရောစပ်နှင့်တည်းဖြတ်တာနှင့်အတူရုန်းကန်နိုင်.
တစ်ဦးကအစွမ်းထက် desktop ကို PC နဲ့သုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပရိတ်သတ်တွေရှိစေခြင်းငှါ. အဆိုပါ CPU နဲ့ power supply မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပရိသတ်တွေရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒါအဆင့်မြင့်ထိပ်တန်းနှင့်အတူအစာရှောင်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်များကိုအလိုတော် (ယူနစ် processing ဂရပ်ဖစ်). တခါတလေ, သီးခြားအမှုပရိတ်သတ်တွေ disk ကို drives တွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လေကြောင်းဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အေးမြအခြားအစိတ်အပိုင်းများပါလိမ့်မယ်.
ဒါပေါ့, ဘက်ထရီကနေ run ပါးလွှာသော Laptop များနှင့် Tablet, ဒါကြောင့်သူတို့ပြည်တွင်းရေးအာဏာကိုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမလိုအပ်ပါဘူး. မဟုတ်သလိုသူတို့သီးခြားဂရပ်ဖစ်ကတ်များရှိဘူး: သူတို့များသောအားဖြင့် Processor ကိုအတူပေါင်းစည်းအဆင့်မြင့်ထိပ်တန်းရှိ, "Intel က Integrated Graphics" ၌ရှိသကဲ့သို့.
သင်တို့သည်တန်ခိုးတွေအများကြီးမလိုအပ်ပါဘူးဆိုရငျ, ထို့နောက်သေးငယ်၏ပဒေသာရှိပါတယ်, ပါးလွှာတဲ့လက်တော့ပ်ကဲ့သို့တူညီသောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုစျေးပေါ PC များ. သူတို့ဟာတစ်ခုခုကိုပန်ကာမပါရှိပါတယ်, သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ပရိသတ်များနီးပါး noiseless များမှာ, Processor ကိုခက်ခဲမောင်းနှင်တဲ့အခါ မှလွဲ..
သို့သော်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သို့မဟုတ်အလေးအနက်ဂိမ်းအဖြစ်တာဝန်များကိုအဘို့အမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သူကဆဲစိန်ခေါ်မှုင်. သင်တစ်ဦးပန်ကာမပါ power supply နဲ့အအေးဖို့ပိုပြီးဆန်းသစ်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုလိုအပျနိုငျ. ဤရွေ့ကားပါဝင် အပူပိုက် - သောပါးလွှာသော Laptop တွေအတွက် ပို. ပို. ဘုံများမှာ - တခါတရံအရည်အအေး.
Mini ကို PC များနှင့် nettops
သငျသညျအသေးစားနှင့်စျေးပေါတစ်ခုခုလိုပါလျှင်, ရှေးခယျြမှု၏ပုံမှန်အတိုင်းကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ရှိပါတယ်: "အတွက်ရှာmini ကို PC နဲ့"Amazon.co.uk အပေါ်ထက်ပိုတထောင်ရလဒ်များကိုရရှိသွားတဲ့. "ကိုရှာဖွေခြင်းnettop PC ကို"တစ်ဦးထက်ပိုစီမံခန့်ခွဲတွေ့ရှိ 34 ရလဒ်များကို, ဒီသက်တမ်းအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်ကြောင့်. မဤသူအပေါင်းတို့စက်တွေပန်ကာမပါရှိပါတယ်, ပိမလျှင်မူကားအများဆုံးတိတ်တဆိတ် run သင့်တယ်.
လူတွေကပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့ Flat-screen ကိုတီဗီစုံမှထို systems attach: သူတို့ကဗီဒီယို streaming များအဘို့ဒဏ်ငွေင်, ဖမ်း-up ကတီဗီန်ဆောင်မှု, နဲ့ရိုးရိုးကွန်ပျူတာ. သူတို့ကအစ Spectrum run နိုင်ပါတယ်, MAME နှင့်အခြားဂိမ်း emulator.
အနိမ့်အဆုံးမှာ, ထိုသို့သောပန်ကာမပါအဖြစ်စျေးပေါစနစ်တွေရှိပါတယ် Voyo ပြောင်မြောက် Mini PC ကို. ဒါက 1.33GHz Intel ရဲ့ Atom Z3735F ရှိပါတယ်, 2eMMC Chip ကိုသိုလှောင်မှုနဲ့သာ£ 89,99 များအတွက် 4K HDMI port ၏မှတ်ဉာဏ်နှင့် 64GB ၏ GB ကို. ဒါဟာ entry-level 10in က Windows လက်တော့အဖြစ်တာအတူတူ spec င်သို့မဟုတ် 2-In-1, ဒါပေမယ့်ကီးဘုတ်နဲ့မျက်နှာပြင်မပါဘဲ. 32-bit Windows ကို 8.1With Bing မှဒါဟာပြေး (ယူဆရအခမဲ့ဗားရှင်း), ဒါပေမဲ့ Windows ကိုမှအခမဲ့အဆင့်မြှင့်ရရှိသွားတဲ့ 10.
Sumvision ရဲ့ဆိုင်ကလုန်း £ 98,50 များအတွက်အလားတူသတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူပိုကောင်းတဲ့နာမည်ကြီးအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Gigabyte Brix အကွာအဝေးကိုလည်းကြည့်ရကျိုးနပ်သည်.
သငျသညျအရာတစ်ခုခုကိုပိုပြီးအစွမ်းထက်ချင်တယ်ဆိုရင်, ပန်ကာမပါ၏ Eggsnow အကွာအဝေးရှိရဲ့, လူမီနီယမ် mini ကို PC များ. ဤရွေ့ကားပါဝင် core i3-4010U သို့မဟုတ် core i5-4200U အသီးသီး£ 212,99 နှင့်£ 248,99 အဘို့မှတ်ဉာဏ်၏ 4GB နှင့် 64GB SSD ကိုအတူဗားရှင်း. သို့သော်, သူတို့မှတ်ဉာဏ်၏ 16GB အထိကြာနိုင်ပါတယ်, 256GB SSDs အထိ, နှင့်ချီ 1.5TB hard drive တွေရန်. သငျသညျ£ 156,99 များအတွက်အခြေစိုက်စခန်း Core i3 system ကိုဝယ်သင့်ကိုယ်ပိုင် memory နဲ့ SSD ကို fit နိုင်.
အဆိုပါ Eggsnow မော်ဒယ်များ Apple ရဲ့ယှဉ်ပြိုင် Apple Mac Mini ကို, သောဉာဏျ၏ 4GB နှင့် 500GB hard drive ကိုနှင့်အတူတစ် Core i5 system အတွက်£ 399 မှာစတင်, နှင့် 8GB နှင့် 1TB drive ကိုအတူတစျခုအတှကျ£ 799 မှာထွက်ထိပ်ဆုံးမှ (လူအပေါင်းတို့သည်အဆင့်မြှင့်တင်နှင့်အတူသို့မဟုတ်£ထားသော 1,759). သို့သော်, နောက်ဆုံးပေါ် 2014 Apple Mac Mini ကိုမှတ်ဉာဏ် In-ရှိတာပါနှင့် update တစ်ခုအဘို့အမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်.
ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ PC များ
အထူးပြုအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်ပတ်သက်သည့်အနုပညာဖြစ်ဖို့အသုံးပြုတိတ်ဆိတ် PC များတည်ဆောက်ခြင်း, ထိုကဲ့သို့သောပန်ကာမပါပါဝါကိုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်အရည်အအေးအဖြစ်, drives တွေကိုအလှည့်အဘို့အ damping ဆက်ပြောသည်, နှင့်အမှုမှတဆင့် Airflow ဖို့သတိထားရမှာ. ငါယူဆ Chillblast ဆဲဒီအချို့ကိုပါဘူး. သို့သော်, အမှုအရာသည်ယနေ့ပိုမိုလွယ်ကူများမှာ, ကုမ္ပဏီများနှင့်တူ barebones ဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူစတင်နိုငျသောကွောငျ့ လွန်း အငယ် ITX motherboards, သို့မဟုတ်ပဲသေးသေးလေးကိုသုံး Intel က NUC (ကွန်ပျူတာ၏ Next ကိုယူနစ်).
အဆိုပါ NUC များသောအားဖြင့်ကြီးမားတဲ့ heatsink နှင့်သေးငယ်တဲ့ပန်ကာတို့ပါဝင်သည်, ဒါကြောင့်ငါငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်ပယ်-The-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း version ကိုမြျှောလငျ့မညျမဟုတျ. သို့သော်, တချို့ကုမ္ပဏီတွေကြောင့် NUC အမှုပေါင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြ, အနှစ်သာရထဲမှာ, ကြီးမားသောအပူစုပ်အဖြစ်အလုပ်. သိသိသာသာ, သင်တစ်ဦးချုပ်ထားအာကာသအတွင်းတစ်ပြေးမလို, ဒါပေမဲ့သာမန်အခြေအနေများအတွက်, သူတို့ TDP န့်အသတ်အတွင်းနေထိုင်ရန်လုံလောက်သောအပူဖြာနိုင်ပါတယ်.
ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ PC ရဲ့ UltraNUC ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, စနစ်တွေ built-To-အမိန့်ခံဗြိတိန်တွင်အတူ. အဆိုပါ UltraNUC Atom ဗားရှင်း£ 325 မှာစတင်, ထိုအာဗေလ-cased စဉ် UltraNUC Pro ကို ပန်ကာမပါ£ 595 မှာစတင်. ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ PC ကိုလည်းများစွာသောအခြားတိတ်ဆိတ်စွာသို့မဟုတ်ဆိတ်ငြိမ် PC များကမ်းလှမ်း, မီဒီယာစင်တာများနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစနစ်များ, ဒါကြောင့်သင်ပိုကောင်းသငျသညျအကိုက်ညီဆုံးအရာတစ်ခုခုတွေ့ပါစေခြင်းငှါ,.
Aleutia ရဲ့ R50 ပန်ကာမပါ - "ဗြိတိန်တွင်ထွင်းထုများနှင့်လက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်" - တဲ့ကြံ့ခိုင်ပေမယ် classy-ရှာဖွေနေ NUC မူကွဲဖြစ်ပါသည်. သို့သော်, တကယ့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စီးပွားရေးအရအသုံးပြုမှုများအတွက်ရည်ရွယ်င်. တစ်ဦး Core i3 နှင့်အတူတစ်ဦး R50 စံ, 4မှတ်ဉာဏ်နှင့် 60GB SSD ပါ၏ GB ကို£ 599 ကုန်ကျ. Aleutia also sellsaT1 nettop “Eco PC” withaCeleron J1800 and 2GB of memory for £349, or with 4GB,a120GB SSD and Microsoft Windows for £499. Tiny Green PC is an alternative supplier.
Most modern desktops now run quietly, except when stressed, and the trend towards low-TDP Atom processors and SSDs is making them even quieter. (You can check the TDPs and benchmarks of different chips at Notebookcheck’s မိုဘိုင်း Processor များ၏နှိုင်းယှဉ်ခြင်း.)
The questions you now have to answer are (တစ်ဦး) how much power do you need, နှင့် (ခ) how much are you prepared to pay for silence?
35031	0 အပိုဒ်, ဂျက်မေးပါ, computing, အင်္ဂါရပ်များ, ဂျက် Schofield
← ယခင် Post မှ သင်ရှိသည်အားလုံးတစ်သံတူဖြစ်တဲ့အခါ, Isis တစ်လက်သည်းနဲ့တူလှပါတယ် →